Muxuu ka yiri Mauro Icardi kooxda Inter uu hoggaaminayo Antonio Conte & imaatinka Lukaku? – Gool FM
(Paris) 16 Okt 2019. Weeraryahankii hore ee kooxda Inter Milan ee Mauro Icardi ayaa sheegay inuu u rajeynayo wanaag oo dhan kooxdiisii ​​hore Nerazzurri, inkasta oo si aan habooneyn ugu biiray kooxda Paris St Germain suuqii xagaaga.
Weeraryahanka reer Argentina ee Mauro Icardi ayaa xilli ciyareedkan qaab amaah ah ugu dhaqaaqay kooxda reer France ee Paris St Germain.
Mauro Icardi ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeysla “Gazzetta dello Sport” ee dalka Talyaaniga wuxuu ku sheegay:
“Kama fileynin soo dhaweyntan dhammaan taageerayaasha kooxda Paris St Germain, waxaan u ciyaaray si fiican kulankii aan guusha ka gaarnay Real Madrid, kaddib waxaan la kulamay dhaawac fudud”.
“Ujeedkeyga waa inaan wax walba oo awoodeyda ah ku soo bandhigaa kooxda Paris St Germain, kaddib waan arki doonaa waxa dhaca dhamaadka xilli ciyaareedka, wali waa xilli hore”.
Intaas kaddib Mauro Icardi ayaa wuxuu ka hadlay kooxda Inter uu hogaaminayo Antonio Conte & imaatinka Lukaku wuxuuna yiri:
“Waxaan kaliya u rajeynayaa guul dhamaan tartamada oo dhan, weli saaxiibo badan ayaan ku leeyahay Milan, waxaana qabaa in kooxda uu hogaaminayo Antonio Conte ay u tartami karto hanashada horyaalka”.
“Uma maleynayo in Lukaku wax dhibaatooyin ah uu qabo, waxaan u maleynayaa inuu si fiican kaga bilaawday kooxda isla markaana uu goolal qaar dhaliyay kulamadiisa ugu horeeyay, kaddib wuxuu la kulmay dhaawac sida aniga oo kale, waana sababta keentay in la dhaleeceeyo, laakiin ma ahan wax sahlan inuu ka ciyaaro Italy, waxaan u maleynayaa inuu bandhig fiican sameyn doono isla markaana uu dhalin doono goolal badan”.